Ọgbọ ozi: aching nweta Millennials na Usoro Data-Nke A Chọtara | Martech Zone
Dị ka a Nyocha a na-adịbeghị anya nke Zillow, puku afọ gara aga na-etinyekwu oge nyocha, na-azụ ahịa maka nhọrọ kachasị mma na ịtụle ọnụahịa tupu ịzụrụ. Ma mgbe oge ọhụụ a nke ndị na-azụ ahịa nke ultra na-anọchite anya nnukwu mgbanwe maka ụdị na ụlọ ọrụ, ọ na-enyekwa ohere ọla edo. Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị na-ere ahịa agbanweela ngwakọta ahịa ha iji lekwasị anya na mmemme dijitalụ, ọ dịkwa oke mkpa iji otu uru nke data nke ọtụtụ puku afọ taa na-eji.
Ojiji nke ọganihu na-adịbeghị anya na nyocha na teknụzụ data ekwesịghị ịdị na ndị na-azụ ahịa. Ndị ụlọ ọrụ nwere ike iji data lụọ ọgụ iji ghọta nke ọma ndị ha na-ege ntị. Site n’ịmara otu puku afọ gafere usoro nyocha, yana ụdị ozi ha na - eri, ndị na - ere ahịa nwere ike imeghari ya ka ha wee nwee ike ịrịọ igwe mmadụ a na - abawanye.
Nye Ha Ihe Ha Chọrọ
Chee echiche banyere ihe na-eme ka saịtị dị ka Amazon dị egwu - ọ ga-amata onye zụrụ ya ma nwee ike ịkwado ịzụta ihe maka onye ọrụ ahụ. Enweghị ihe kpatara azụmahịa gị enweghị ike ịbanye n'ime ụdị data a nchịkọta, ọ bụrụgodị na ị na-arụ ọrụ brik na ngwa agha.
Dịka ọmụmaatụ, anyị mepụtara algorithm na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 1,000 mgbanwe dị iche iche nke na-enyere ndị na-ere ụgbọ ala aka ịghọta ụdị ụgbọ ala ndị ahịa ha nwere ike ịzụta. Nke a na-atụle ihe ndị dịka omume ịzụrụ n'oge gara aga, ụdị ndị a ma ama na ahịa ala ahụ, nyocha asọmpi na ọtụtụ ndị ọzọ. N'ụzọ ahụ, mgbe otu puku afọ chọpụtachara ụdị ụgbọ ala ọ chọrọ, anyị ga-ahụ na ụgbọ a dị na nke onye na-ere ahịa ka ha wee dịrị njikere ire ya mgbe puku afọ ahụ ga-apụta.
Millennials na-agaghị na-eleta ụgbọ ala nza na aimlessly agagharị na; ha na-eme akụkụ ahụ na ntanetị. Ha na-emefu 17 awa ịzụ ahịa na ịntanetị maka ụgbọ tupu ịzụta. N'oge nke taa, ọ bụ ọrụ nke ndị na-ere ahịa iji hụ na otutu ahaziri maka ụtọ otu puku afọ. Millennials nwere njikere na data; ịkwesịrị iburu ihe dịka data (ma ọ bụrụ na ọ bụghị karịa!) Iji dịrị njikere maka ha. Otu ụzọ dị mfe iji mee nke a bụ site na ịlele data ahịa akụkọ ihe mere eme, yana onye ị na-ere ahịa. You na-agbanwe ndị na-azụ ahịa puku afọ? Ọ bụrụ otu a, ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ndị dị a graaa ka ha chọrọ? Site na itinye ihe omuma a, ị nwere ike ịmepụta ngwa ahịa gị kachasị mma ma nwekwuo ahịa n'ọdịnihu.
Ọnụ ọgụgụ dị egwu nke 81 nke ụmụ afọ 18-34 na-achọ echiche sitere n'aka ndị ọzọ tupu ịzụta, dị ka nyocha site na Mintel. Ma mgbe onye nwe azụmaahịa nwere ike ịtụ ụjọ n'echiche nke okwu na-adịghị mma nke ọha na eze, nyocha ndị dị n'ịntanetị na-enye ohere iji nweta nzacha, nzaghachi n'eziokwu banyere ihe ndị ahịa gị chere banyere ahụmịhe ha. M na nyocha na saịtị ndị dị ka Yelp, Edmunds, TripAdvisor, Cars.com, Angie's List (ihe ọ bụla bara uru na ụlọ ọrụ gị) ma soro ndị otu gị rụọ ọrụ iji dozie nsogbu ọ bụla.
Mana etinyela uche naanị na nyocha ndị na-adịghị mma. Nyocha ndị dị mma nwere ike ịbụ ihe na-enye nkọwa, n'ihi na ha na-akọwa echiche nke ụdị na aha gị. You maara maka ezigbo ọrụ ndị ahịa? Maka nnukwu ego? Maka nhọrọ buru ibu? Mgbe anyị na ndị na-ere ụgbọ ala na-arụkọ ọrụ, anyị na-amata ihe ike ha, ma soro ha rụọ ọrụ iji hazie ahịa na azụmaahịa ha. Iji maa atụ, ọ bụrụ na ndị ahịa hụrụ ọnụahịa ha n'anya, ha nwere ike ọ gaghị achọ ịkpọsa ụdị BMW ahụ.
Nyochaa Ahụmahụ Mobile
Naanị ịbanye na ụlọ ahịa gị otu puku afọ ezughi ezu, n'ihi na ahụmịhe mkpanaka na-arụ ọrụ ugbu a na omume ịzụ ahịa n'ime ụlọ ahịa. Pasent 57 nke puku afọ jiri ekwentị ha tụnyere ọnụahịa mgbe ha nọ n’ụlọ ahịa. Ọ bụrụ na ị nwere ihe na-adọta anya ha, na onye na-ere ahịa na-enye aka nke na-aza ajụjụ ha, ị ka nwere ike ịre ahịa ahụ ma ọ bụrụ na onye ahịa Googles onye asọmpi gị n'okporo ámá wee hụ ọnụ ala. Ha na-amụkwa ihe ọmụma dị elu - dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na onye na-ere ụgbọ ala na-aga n'ihu banyere otu ụgbọ ala kwesịrị ntụkwasị obi, mana ndị ahịa na-agụ nyocha niile ndị a gbasara ụgbọ ala ahụ, ha ga-enwe ajụjụ.
Ozi ọma dị ebe a bụ na ahụmịhe mkpanaka nwere ike ịrụ ọrụ dị ka ụdị data maka ndị otu gị. Omume ụfọdụ mock ịzụ ahụmahụ na-eche banyere ihe na mmadụ nwere ike anya na ha na ekwentị. Ihe ndị dị na ụlọ ahịa gị, ndị asọmpi mpaghara, nyocha, wdg. May nwere ike ịmụ na onye na-asọ mpi na-egosi mgbasa ozi maka ego mgbe ọ bụla mmadụ na-achọ ngwaahịa a ma ama nke gị. Ma ọ bụ ikekwe weebụsaịtị gị anaghị egosi mgbe mmadụ na-achọ ngwaahịa ahụ, na-egosi na ịnwere ike ịnwe ọrụ SEO ịme.
Mana nke a abughi nani egwu egwu - ọ nwekwara ike ikpughe ohere. Dịka ọmụmaatụ, anyị enyerela ndị mmekọ anyị na-ere ahịa aka ịmata oge ebe ndị na-asọmpi ha anaghị arụ nnukwu ọrụ ire ahịa otu ụdị ma ọ bụ ụdị. Nke a na-akpali ndị na-ere anyị ịchekwa ụdị ahụ, ikekwe na ọnụahịa ka mma ma ọ bụ mma, ma mepụtakwu ego.
Data dị ebe niile. Jiri ya.
Mgbanwe dijitalụ abụghị naanị ịmalite peeji Facebook ma ọ bụ na-agba ụfọdụ mgbasa ozi ọchụchọ. Ihe atụ ndị a dị n’elu na-anọchi anya ụzọ ole na ole ị ga - esi banye na ozi ịntanetị, yana ahụmịhe onye ọrụ, iji ghọta onye ahịa gị nke ọma. Site na ile anya na ntanetị site na anya ndị ahịa gị, ị ga-enweta nghọta nke ihe niile ha na-ahụ n'oge usoro ịzụta, na-enye gị ohere ịhazigharị n'ụzọ kwekọrọ na ya iji merie azụmahịa ha.
Tags: ụgbọ ala nzaụgbọaladata-chụpụrụmgbanwe igwe di iche ichegoldman sachsmillennialMillennialsNkejimobile ahụmahụnyocha ndị na-adịghị mmaịzụta omumeNyochazillow